मौलाकालिकाको गमन ः स्वस्थ र सुन्दर जीवन | चितवन पोष्ट दैनिक
मौलाकालिकाको गमन ः स्वस्थ र सुन्दर जीवन
२०७१ फाल्गुन २६, मंगलवार ०१:४९ गते
शारीरिक रुपमा स्वस्थ मानिस सामान्यतया मानसिक हिसाबले पनि सबल हुन्छ । त्यसै हुनाले मानिस आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि विभिन्न उपायहरुको अनुसरण गर्ने गर्दछ । बिहान वा साँझपख हिँडडुल गर्नु, व्यायाम गर्नु, थेरापी गर्नु, मसाज गर्नु, विभिन्न किसिमका खेल खेल्नु, साइक्लिङ गर्नु, जगिङ गर्नु, योग गर्नु, घरभित्र वा बारीको काम गर्नु, उमेरअनुसार आहारविहारमा परिवर्तन ल्याउनु आदि इत्यादि यसका उदाहरणहरु हुन् । यी माथि उल्लेखित उपायहरुमध्ये म चाहिँ आजभोलि साइक्लिङ गर्नेमा परेको छु । किनकि, हालसाल म लामो समयसम्म उभिन र धेरैबेर हिँड्न सक्तिनँ । भ¥याङ चढ्नु वा उकाली–ओराली धाउनु मेरो लागि समस्या बनेको छ ।
गत फागुन ९ गते शनिबार बिहान साइकल चढेर गैँडाकोट मौलाकालिका मन्दिरको फेदी बाघखोर पुग्दा लामो समयपश्चात् मात्र मलाई देखेका त्यहाँका बासिन्दाहरु छक्क परे । धेरै दिनपछि भेट भएको हुनाले उहाँहरुसँग मेरो लामै भलाकुसारी भयो ।
केही वर्षअगाडिसम्म म चितवनमा भएको बेला र घर छोड्न नमिल्ने बिहानबाहेक हरेक बिहान चार बजे नै उठेर बाघखोरसम्म मोटरबाइकमा र त्यसपछि मौलाकालिका भगवती जाने ठाडो सिँढी बाटो उकालो कहिले एक्लै र धेरैजसो साथीभाइहरुसँग मिलेर चढ्थेँ । यो क्रम २०५८ सालदेखि २०६७ सालसम्म गरी झन्डै नौ वर्ष जारी रह्यो । कहिलेकाहीँ बिनाजुत्ता नांगो खुट्टा पनि हिँड्थेँ । बिहान मौलाकालिका उक्लने म बाहेक अन्य थुपै्र भाइबहिनीहरु आजसम्म पनि यथावत् गइराखेका छन् ।
उकालो चढाइको नशा र मोह यति धेरै बढ्यो कि कुनै कारणले त्यहाँ जान नपाएको दिन केही गुमेको, केही छुटेको जस्तो मलाई महसुस भइरहन्थ्यो । यही उकालो चढाइको अभ्यासको कारणले होला मैले आफ्नो ६२ को उमेरमा पनि झन्डै १८ हजार फिट अग्लो शिखर थोरंगला पार गरेर २०६७ सालमा मुक्तिनाथ पुगेको थिएँ । मनाङ हँुदै मुक्तिनाथ जाने अन्नपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मार्गमा यो थोरंगला पर्दछ ।
२०६७ साल आश्विन २९ गते धार्मिक सेवा समिति मौलाकालिका मन्दिरको एक समारोहका बीच तत्कालीन पर्यटनमन्त्री श्री शरदसिंह भण्डारीबाट त्यस वर्ष मौलाकालिका मन्दिरमा धेरैपटक पुग्ने (त्यसबेला उपस्थिति हाजिरी रेकर्ड राख्ने चलन थियो) र धेरैपटक चन्दा बाकसमा दान गर्ने व्यक्तिहरु भनेर श्री पुष्पलाल श्रेष्ठ, म आफैँ र श्री प्रकाश तिवारीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । मौलाकालिका भगवतीको दर्शनार्थ जाने महिला–पुरूष भक्तजनहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । नेपालभित्र र बाहिरसमेतका तीर्थालुहरु त्यहाँ पुग्न रूचाउँछन् । एकातिर भगवती माताको दर्शन त अर्कोतिर शारीरिक स्वस्थता “एक पन्थ दो काज” दुवै हातमा लड्डु !
तर, म भने दुर्भाग्यवश आजभोलि त्यहाँ पुग्न असमर्थ भएको छु । लामो समयसम्म कालिकाको उकालो चढेका कारण मेरो अवस्था त्यस्तो भयो । त्यसैले, मौलाकालिका उकालो चढ्नुहुँदैन भन्ने गलत प्रचारप्रसार भएको कुरा मैले सुनेको कारणले म यो लेख लेख्न बाध्य भएको कुरा पाठकहरुसमक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो समस्याको साँचो कुरा यस प्रकारको छ ः
२०४९ सालमा मोटरसाइकलमा हेटौँडा जाँदा सडकमा अचानक एउटा बच्चाले बाटो काट्यो । उक्त बच्चालाई बचाउन मोटरसाइकल मोड्नु परेका कारण म र मसँगै सवारमा रहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ
(पटियाला) को दुर्घटना भएको
थियो । त्यतिबेला मेरो देव्रे खुट्टा
(घँुडा)मा नराम्ररी चोट लाग्यो । उपचारका लागि काठमाडौँमा एक महिनाजति बसेँ । त्यसपछि मेरो खुट्टा सामान्य थियो । २०६५ सालदेखि पलेँटी कसेर बस्दा कहिलेकाहीँ असह्य दुखाइ हुन्थ्यो, तर उठेर खुट्टा तन्काएपछि ठीक हुने गर्दथ्यो ।
२०७० साल भाद्र १७ गते एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालनार्थ तयारीको शिलशिलामा भाद्र १६ गते दिउँसो उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको भवन नारायणगढको एउटा कोठामा घुँडा टेकेर ल्यापटप कम्प्युटर चलाउँदा मेरो देव्रे घुँडा अचानक दुख्न थाल्यो । स्थानीय रामेश्वर पुस्तकालय क्षेत्रपुरमा भोलिपल्ट भाद्र १७ गतेको कार्यक्रमको उद्घोषण मैले नै गरेको थिएँ । उद्घोषणको शिलशिलामा पटकपटक उभिन पर्दा मेरो दुखाइ बल्झिँदै गयो । त्यसको पर्सिपल्ट स्थानीय नारायणगढ बसपार्कनजिकैको गौरेश्वर मन्दिरमा गएर घर फर्कंदा बीच बाटोमै म हिँड्न सकिनँ । भाइहरुको सहयोगले म घरसम्म आइपुगेँ । धेरै उपचारहरु गरेँ, अझै पूरा निको हुन सकेको छैन ।
मेरो पहाडघर बन्दीपुर हो । त्यहाँ हरेक दिन गाउँ–बेँसी गर्नुपर्ने थुप्रै उकाली–ओरालीहरु छन् । हाम्रा पुर्खाहरु हरेक साँझ–बिहान त्यहीँ उकाली–ओरालीमा कुर्लुम्म भारी बोकेर बुढेसकालसम्म ओहोरदोहोर गर्ने गर्दथे । उहाँहरुको घुँडा कहिल्यै दुखेनन् । उकाली–ओराली गर्दा घुँडा दुख्ने भए उहाँहरु हामीभन्दा फरक कसरी हुनुभयो ? यो खोजीको विषय होइन र ?
वास्तवमा मेरो घुँडा दुख्नुको मुख्य कारण २०६४ सालकै मोटरसाइकल दुर्घटनाको असर हो । यसबाहेक अन्य कारणहरु पनि हुन सक्छन्, तर यसमा मौलाकालिका मन्दिरको उकालो बाटो निर्दोष छ । अन्य कारणहरु निम्नलिखित हुन सक्छन् ः
१. म ६७ वर्षको भैसकेँ । उमेरको हिसाबले पनि मेरा हाडजोर्नीहरु कमजोर छन् ।
२. मेरो शरीर मोटो छ । मेरो उचाइअनुसार हुनुपर्ने तौलभन्दा मेरो तौल धेरै नै बढी छ ।
३. स्पष्ट भन्नुपर्दा मेरो उमेरअनुसारको आहारविहारको लक्ष्मणरेखाभित्र म बस्न सकेको छैन ।
४. म धेरै वर्षअगाडिदेखि उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गरिरहेको व्यक्ति हुँ ।
५. उकाली–ओराली धाउँदै नधाउने वृद्ध अवस्थाका थुप्रै व्यक्तिहरुको आजभोलि घुँडा दुख्ने रोग देखा परेको छ ।
६. धेरै मानिसहरु जस्तै म पनि सधैँ प्रांगारिक मल प्रयोग नभएको अर्थात् कीरा मार्न प्रयोग गर्ने बाजारू विष छर्केको सागपात, तरकारी खान बाध्य छु ।
माथि उल्लेखितमध्ये धेरै कारणहरुले मेरा घुँडा दुखेको हुन सक्छ । यसमा उकालो हिँडाइको पनि सूक्ष्म सहभागिता होला, सम्पूर्ण चाहिँ होइन । अतः शारीरिक रुपले तन्दुरूस्त बाल, वृद्ध, वनिता जोकोहीका लागि पनि उकाली–ओरालीको यात्रा फाइदाजनक
हुन्छ । मधुमेह रोगीहरुका लागि त यो रामवाण नै हो । यसले स्वासप्रश्वास प्रणाली राम्रो गर्छ र शरीर स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । तथापि उकाली–ओराली गर्दा सामान्य गतिमा हिँड्नुपर्छ । दौडधूप गर्नुहुँदैन । ओर्लने बेलामा मोटो शरीर हुनेहरुले सकभर लौरीको सहारा लिने वा ठाउँठाउँमा बस्दै आराम गर्दै ओर्लनु उत्तम हुन्छ । मौलाकालिका उकालो चढौँ, रोग भगाऔँ । जय मौलाकालिका भगवती !